काठमाडौं – आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । शुक्रबार तोलाको ९१ हजार ६ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज तोलामा ९ सय रुपैयाले बढेर तोलाको ९२ हजार ५ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
यो पनी पढ्नुहोस्ः घट्यो अमेरिकी डलरको मूल्य, हेर्नुहोस कुन देशको कति पुग्यो ?
काठमाडौँ/ नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११६ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ ।
बेलायती पाउण्ड एकको खरिददर १६४ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बाँकी तालिकामा हेर्नुहोस्ः
घट्यो सुनचाँदीको भाउ, कतिमा हुदैछ कारोबार?
आज ह्वात्तै उकालो लाग्यो सुनको भाउ
आज घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
३८ श्रीमती र ८९ सन्तान रहेका विश्वकै ठूलो परिवारका घरमुलीको ७६ वर्षकाे उमेरमा नि’धन
प्रभासको ‘बाहुबली’को रेकर्ड उनकै ‘आदिपुरुष’ले तोड्दै ?
अभिनेत्री सामन्थालाई नेटफ्लिक्सको ८ करोड अफर
सलमानको फिल्म ‘राधे’ हलमा रिलिज, पहिलो दिनको कमाइ ६ हजार १७ रुपैयाँ
आखिर ट्विटरमा किन चल्यो ‘करिना बहिष्कार’ अभियान ?
बाहुबलीका कटप्पा जस्तै देखिने ९८ बर्षीय वृद्ध सामाजिक संजालमा भाइरल – भिडियो सहित
अष्ट्रेलियामा रहेको छोरालाई नेपालबाट आमाको पत्र : ‘पैसाको बोट कस्तो हुँदो रहेछ ?’
डाक्टर बन्न काठमाण्डौ गएका प्रमोद खरेल यसरि बनेका रहेछन गायक
लोकप्रिय बन्दै ‘फुल बुट्टे सारी’को पञ्जाबी भर्सन (भिडियो सहित)
अब नेपालबाटै टिकटक भेरिफिकेसन, युट्युवमा जस्तै यसरी पैसा कमाउन सकिने
© Sajhasanjal.com 2021 All right reserved